Google Earth 7 na-egbochi ijide ihe oyiyi eserese - Geofumadas
Google Earth 7 na-egbochi njide nke foto ndị a na-edegharị
Febụwarị, 2013 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
Mgbe ụdị ọhụụ nke Plex.Earth 3 na-achọ ịpụ, anyị ghọtara na ọ bụ ezie na ọ na-akwado ibupute ọrụ ọrụ weebụ ọrụ, nnukwu uru ọ nwetala ruo ugbu a ịnwe ike iwepụta ihe osise nke Google Earth ... agaghị adị odi mfe
Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na Google, na-achọ igbochi ndị ọrụ nweta site na njide ihe ActiveX iji mepụta onyonyo ortho, emechila na nnwere onwe ya nhọrọ iji mebie ala ahụ, nke ihe oyiyi ahụ gbagọrọ agbagọ na-etinye onwe ya na ụdị dijitalụ . Nke a ga-emetụtakwa ndị zụtara nsụgharị Stitchmaps n'otu ụzọ ahụ na ndị ji aka ha mee ya site na mbipụta akwụkwọ wee sonyere ha na Photoshop.
Echetara m iburu Tomás, onye okike nke Cartesia, butere isiokwu a tupu afọ kọfị. Ọ dị ka ihe siri ike na Google nwere ike ịbanye na nkwekọrịta na PlexScape iji nye ya ikike nke AutoDesk gọrọla kemgbe ụdị AutoCAD 2013. Na, mgbe anyị zụtara ihe onyonyo na Geoeye, otu n'ime mmachibido iwu bụ inwe nkenye ọnọdụ na ;ntanetị; ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ itinye obere ngalaba na mkpebi dị elu ma ọ bụ ihe ngosi niile na nha belata. Yabụ ọ bụ ihe ijuanya na ọ nabatara ihe Plex.Earth mere ruo nsụgharị 6 nke Google Earth.
Na nke a, ndị ọrụ nwere ike ịga n'ihu na-eme ya na Google Earth 6 ma ọ bụ zụta ụdị akwụ ụgwọ na-aga maka dollar 400, dịka José gwara anyị Blog GIS & AutoDesk.
Obere oge, amalitere m ịnwale ule gbasara mpaghara ọdịdị ala dị larịị, enwere m ike ịchọpụta na ntụgharị ahụ pere mpe; nke ahụ n’agbata mita atọ na asaa. Ma mgbe m na-anwale mpaghara na-enweghị atụ, achọpụtara m na nsonaazụ ya abụghị ọdachi.
Ka anyị lee ihe atụ na-esonụ, na maka ebumnuche nke isiokwu a, ahọrọla m ebe isi gosipụtara ọnụ ọgụgụ elu elu, dị na ugwu nke karịrị 200 mita n'ogo:
Ebe ọ bụ na ókè dị na etiti ahụ, ihe mgbagwoju anya nke enyemaka ahụ adịghị ahụ anya, ọ bụ ezie na o doro anya na na njedebe dị ka egosiri na ihe ndị na-esonụ mgbe anyị na-agagharị n'aka ekpe na n'aka nri.
Ugbu a, ka anyị chee na ị na-agba mbọ ma na-achọ ịkpụkọ ihe dịka nke a. O doro anya na nke a, Google na-ewe nzọụkwụ dị mkpa maka maka ụdị akwụ ụgwọ ya iji ree karịa, yana iji gbochie mmebi nke nbudata dị ukwuu.
Ka ọ dịgodị, iji dozie nsogbu ahụ, Plex.Earth agbakwunyela 3 mbipute Ụfọdụ ụdị dịka:
Ikike ịkwado WMS, nke anyị nwere ike iji kpochapụ ihe oyiyi na mpaghara ala na-arụ ọrụ na ụkpụrụ OGC si IDE nke mba ọ bụla.
Ohere nke ibudata onyonyo site na BingMaps, nke n'agbanyeghị na ọ nweghị otu mkpuchi ahụ, na-erutekwu kwa ụbọchị. Ọ na-akwado OpenStreet Maps.
Mgbanwe maka nsụgharị ọhụrụ ahụ:
A na-ekpochapụ ụdị akwụkwọ ikikere Standard-Pro-Premium, ebe ụdị ọ bụla nwere ikike dị iche iche na nke nta nke nta. Ugbu a ụdị ọ bụla nwere ihe niile.
Ụdị ndị ọhụrụ ahụ bụ Business Edition na Enterprise Edition, yana ikike niile ma dị iche iche site na ọnụ ọgụgụ igwe.
N'ihe banyere ụdị azụmahịa, enwere ọnụahịa maka otu akwụkwọ ikike, yana ọzọ maka ịzụta ikikere 2 ruo 10. Iji uru na enwere ike iji ikike na igwe abụọ, dịka ọmụmaatụ, n'ọfịs na n'ụlọ, ma ọ bụ na desktọọpụ PC na laptọọpụ. Chọpụta, enweghị ike iji ya n'otu oge.
N'ihe banyere ikike nke ụlọ ọrụ Enterprise, e nwere ọnụahịa maka ikikere 10, nke nwekwara ike iji ya na igwe abụọ ọ bụla; ma ọ bụ 20 na mkpokọta. Ihe na-adọrọ mmasị nke a bụ maka ụlọ ọrụ, ebe ọ bụ na ha na-ese n'elu mmiri, ka ha wee nwee ike iji igwe ọ bụla jikọọ na netwọkụ, na-eji nyocha iji jide ikike dịnụ wee lelee ịhapụ ya.
Na njedebe, ọnụahịa ndị ahụ ga-adị ọnụ ala ma ọ bụrụ na anyị na-atụle igwe igwe abụọ.
Anyị maara na site n'etiti ọnwa nke February nke a Plex.Earth a ga-adị, site na nke anyị na-ahụ mma nke Map Explorer na ugbu a na-agụnye ihe ọhụrụ mosaic.
Previous Post«Previous Ihe nhazi 2 nke Cadastre na OAS na-akwalite
Next Post Kedu ihe nwere ike ịbụ ihe kpatara arụkwaghịm nke Pope BenedictNext »
3 Azịza ya na "Google Earth 7 na - egbochi ijide ihe onyonyo ortho"
kıvanç kwuru, sị:
Ọnọdụ a na-emetụta mgbe ịchọrọ ibudata ihe mkpuchi iji sonyere ha dị ka ihe mgbochi.
Ịgagharị na-ejikarị, ọ dịghị nsogbu, ọ dịghị mgbagha ọ bụla, ma e wezụga na enweghị ike ịkwụsị ebe ahụ.
Artur Castillo kwuru, sị:
Ndewo, kedu ka ị si bụrụ ndị enyi si Geofumadas, lee ma m ghọtara mgbe ahụ post a ọ pụtara na na Google Earth ọhụrụ 7 ihe onyonyo ga-agbagọ? ya mere ha tufuru ike mgbe ebudatara ha ma ọ bụ mee nchọgharị na otu GE? M ka nwere nsụgharị 6.3 ... ọ bụrụ na ị ziri ezi ọ bụ ihe doro anya na ha na-eme ya ka GE wee reekwuo ya na ikikere, ha na-etinyekwu ube .. Ana m eche azịza gị enyi g!